Ciidamada Kumandooska Dalka Mareykanka oo Howl galo aan Caadi aheyn ka fuliyay Gudaha Soomaaliya - iftineducation.com
iftineducation.com, MOGADUSHU – Ciidamo Mareykan ah oo watay Diyaarado Dagaal ayaa xalay Howl galo waxa ee kasameeyeen Degmada Hubyo ee Gobolka Mudug halkaas ee si toos ah Ciidamadu uga dageen ugana soo furteen Shaqaalo ajaaniib ah oo xoog lagu heestay.
Ciidamada Mareykana ayaana xoog kusoo furtay labo Shaqaale Ajnabi ah oo u shaqeenayay Hay’ada DBG oo bilo kahor laga afduubtayu Magaalada Gaalkacyo loona ka xeestay Magaalada Hubyo.
Shaqaalahan Ajaaniibta ah ayaa waxaa gacan ku hayay kooxo Burcad badeed Soomaali ah oo ku doonayay madax furasho adag in laga siiyo shaqaalahaasi ajaaniibta ah eena dsii deyn doonaan.
Ciidamada Kumandooska Mareykanka oo Helicoptaro watay ayaa ka dagtay goobtii ee Kooxaha Burcad Badeeda ku heesteen lamaanayaashaasi iyaga oona goobtaasi ku dilay 5-lamid ah kooxihii Burcad Badeeda ee gacanta ku hayay Shaqaalahaasi tira kalaan ku dhaawacay Howlgalkaasi.
Ciidamada ayaana intaasi kadib waxa ee goobtaasi ka kaxeesteen Shaqaalihii ajanaiibta ahaa iyaga oo ku qaatay Diyaarad Helocopter ah lamana oga halka ee u kaxeesteen.
Diyaaradaha Howlgalka fuliyay oo la sheegay in dhoor xabo ahaayeen ayaana mudp kusugnaa Garoonka Diyaardaha ee Magaalada Gaalkacyo iyo qeybo kale oo gobolkaasi katirsan iyagoona markii danbe gobolkaasi ka baxay markii Howlgalka ku guuleesteen.
Waa howl galkii ugu horeeyay oo nuucaan ah oo mudo ka dhaca Gudaha Soomaaliya kuwaa ee Kooxaha burcad badeeda Soomaalida looga furto dad ee soo qafaasheen.